Analog Tire Gauges Factory, Suppliers |China Analog Tire Gauges Manufacturers
• Heavy duty bayonet inflator gauge ine brass valve mechanism ichapa makore ebasa rakavimbika
• Sleeve yekudzivirira pamusoro pe dial chubhu kuitira kudzivirira kukanganiswa, inoshingirira kuoma kwegaraji repamba kana kushandiswa kwechitoro chekutengesa.
• Iyo bayonet inflator gauge inoratidzira yakasimba brass bar gauge calibrated 10 - 120 PSI mu 2 PSI increments.
• Iyo bayonet inflator gauge inovakwa neheavy duty cast body iyo yakagadzirirwa kurarama kwenguva refu uye kusimba.
• Max 300 PSI hybrid rubber hose, 1/4” NPT kana BSP air inlet
• Lever action trigger uye heavy-duty kuvaka, inopa hupenyu hurefu hwebasa kunyange nekushandisa nguva dzose
• Pedzisa nebhuras chiratidzo chebhari yekuverenga nyore
• Inosanganisira 12 inch hose ine pressure range inopa 10-120 PSI (2 lb increments)
• Clip-on air chuck yekushanda kweruoko rumwe
● Hunyanzvi hwakagadzirwa kuti hushandiswe mumaindasitiri hunopa kumanikidzwa kukuru kwendege kusvika ku150 PSI
● Linear gauge kuverenga muPSI ine 2psi increment, inogona kugadzirirwa Bar, Kpa nezvimwe.
● Tough die cast Aluminium body ine simbi inoshanda lever uye inokanganisa inonwisa bumper
● Yega yega inorema tyre inflator ine geji inoyedzwa-kushanda uye yakarongerwa kune yepasirese chiyero chechokwadi: ANSI B40.1 Giredhi B (2%) uye EN12645: 2014
● Mhepo inopinza - 1/4 NPT kana BSP Mukadzi
● Air pressure range: 0 - 150 PSI / 0 - 10 Bar
● Magadzirirwo akaitwa anoita kuti zvive nyore kuchengeta kure
● Yakanakira maworkshops, matai bays uye kumberi kwegaraji
● Huru yekuona hwindo rekuona rinopa nzvimbo huru yekuona
● Kureruka kurema kunopa kuderera kwebasa uye nyore nyore kudzokorora kushandiswa
● The heavy duty tyre inflator ine geji i slim line profile, iri nyore kushandisa uye isinganyanyi kukuvadza kana yadonha.
● Heavy duty tire inflator ine geji inouya nerubber grip pa chuck inova misoro miviri uye ibatisise maitiro.
● Ivhavhavha yekubuda ropa yakapatsanurwa inodzivirira kuvhiringika kwekuputira uye kupera simba.
● Zvose mavharuvhu cartridges uye geji zvinogona kutsiviwa.Kudhonza kushoma, kukweshana kwakadzikira & kuderera kwekufamba inertia zvinoreva kuti hapana ngura yemukati, hapana kunamatira uye hapana kutsvedza kwechokwadi.
Tire Inflator Ne Dial Gauge
• Operation – Inflate, Deflate & Mesa
• Tire inflator ine dial gauge inoratidzira rubber bump guard kudzivirira kubva pakudonha nekugogodza
• Chigunwe chikuru chakashandiswa inflator bhatani uye nyore kuwana deflator bleed bhatani
• Tire inflator ine dial gauge ine zviyero zvakawanda: PSI, Bar, Kpa
• Inflator yeTayi ine dial gauge ine 12” flexible rubber hose
● The heavy duty rori pressure gauge inovakwa ne 2 inch / 50mm dial gauge uye 11 inch / 230mm yakawedzerwa mbiri mbiri yakatwasuka air chuck.
● Dual head (push-pull) tire chuck inoita kuti kuyerwa kuve nyore kana hunde yevharuvhu yevhiri yakamira munzvimbo dzakasiyana, ose emukati nekunze matai emavhiri ega uye maviri.Inotenderera tire air chuck inogona kuiswa kumota zhinji, kunyanya kumarori, trailer & RVs.Iyo yevharuvhu yepakati yakagadzirwa nendarira yakasimba, iyo inodzivirira ngura uye inoumba nyore chisimbiso nehunde yevharuvhu.
● Iyo yakaoma uye yakasimba precision gauge inodzivirirwa nerubha chivharo chekudzivirira kuvhunduka uye kubata kukuru.
● Unhu hwematairi ekumanikidza gauge hunoyerwa ku +/- 2% kururamisa kwekuzara kwakazara kwevhiri.
● Kunyanya kudzvinyirirwa kwe160 pounds per square inch / 11 bar nekuwedzera kwe 2 psi / 0.2 bar.
● Hapana kudiwa mabhatiri uye kuderera kwekugadzirisa, iyo yehutano tire pressure gauge iri nyore kushandisa uye yakavimbika mumamiriro ese ekunze.Iyo yakasimba yekuvakwa kwemakina inoita kuti ishandiswe kumota, van, rori diki, asi, rori, SUV, tirakita uye inorema mota etc.
● Build in air bleeder valve yakagadzirirwa kudzikisa matayi uye gauge reset mushure mekuyeresa kudzvinyirira kwetai.
● Hunhu hwetairi pressure gauge inoratidzira chivakwa chesimbi nendarira chine chuck yakawedzerwa hunde.Iyo 360 degree swivel bhora tsoka yemhepo chuck inotenderera zvizere uye inoita kuti geji isvike kune chero chinzvimbo chevhirivhavha kuitira kuti iwane chisimbiso chakakwana pasina kubuda kwemhepo.
● Rugged uye yakasimba precision gauge yakavharwa nerabha inodzivirira kuti ipe zvirinani kuvhunduka uye kubata kukuru.
● Hunhu hwematairi ekumanikidza gauge hunoyerwa ku +/- 2% kururamisa kwekuzara kwakazara kwevhiri kumanikidzwa, iyo inosangana neyakajairwa ANSI B40.1 uye EN12645: 2014.
● The gauge ranges kusvika ku100 psi kana 7 bar ine increment ye 2 psi kana 0.2 bar.
● Hapana kudiwa mabhatiri uye kuderera kwekugadzirisa, iyo yehutano tire pressure gauge iri nyore kushandisa uye yakavimbika mumamiriro ese ekunze.Iyo yakasimba yekuvakwa kwemakina inoita kuti ishandiswe kumota, mudhudhudhu, van, rori rakareruka, SUV, RV uye ATV nezvimwe.
● Iyo compact size 1.5 inch / 38mm dial inoita kuti chikwata chichengete zvakanaka mukamuri regirovhosi, centre console kana bhokisi rekushandisa, uye rinoshanda kuvarume nevakadzi.
● Kudzvinyirira kubata basa, mushure mekuverenga mutyairi anoda kusunungura mhepo mukati megeji nekudzvanya vheji yeropa remhepo.Iyo air bleeder valve zvakare ndeye deflation yematayi.
● Liquid yakazadzwa analog geji inopa yakakwirira-yechokwadi kuyerwa.
● Pfuti inofefetera matai ine geji ine chivharo chakavakirwa muvhiri chinobudisa ropa kuti chidonhedze simba rako kusvika pamwero waunoda uye kuderedza kumanikidza kwemavhiri akawandisa.
● Pfuti inflator yevhiri ine geji ine yakakwira flex hose uye inosanganisira clip-on air chuck kuitira kuti zvive nyore, mamwe marudzi chucks aripo.
● 1/4 inch NPT / BSP inokodzera
● Oiri yakazadza kumanikidza gauge zviyero muPSI (0-230) uye Bar (0-16)
● pfuti inflator yevhiri ine geji iva nechokwadi chekuverengwa kwemhepo chaiyo pamatayi ako ne 1/2 lb. increments uye 2% yakarurama.
● Liquid inobata vibration/pressure spikes, inoderedza kusakara, uye iri nani munzvimbo dzine ngura.
● Mageji akazadzwa neoiri ane vharafu pamusoro pegeji inokubvumira kuenzana zvachose mukati nekunze kumanikidza, kuvimbisa chokwadi.
● Kuyerwa kwepfuti inflator yevhiri ine geji: 0 - 170PSI kana 0 -12 Bar
● Pfuti inopinza vhiri ine geji inoratidzira kuyerwa muPSI neBar.
● Inoenderana ne¼” NPT mhepo compressor inobuda
● Kushanda kwakaedzwa & kuenzaniswa kwakarurama kusvika ku2% yakazara chiyero nekugadzirisa kuratidzwa kwe0.2PSI kwepamusoro-soro.
● Yakavakwa nehupamhi hwepamusoro, simbi inorema uye zvikamu zvendarira, pfuti inflator yevhiri ine geji inopa kushanda kwenguva refu;Kushandisa mota dzese, senge mota, SUV, rori, mudhudhudhu, bhasikoro (ine Schrader valve) nezvimwe.
● Geji yakachengetedzwa nebhutsu yerabha.